My freedom: တပေါင်းလ သဲပုံစေတီပွဲ
ဒီရက်ပိုင်း စင်္ကာပူမှာ ရာသီဥတုအရမ်းပူတာပဲ။ ဒီမနက်အပြင်သွားပြီး ပြန်လာကတည်းက ခေါင်းကိုက်နေတာ ခုထိမပျောက်သေးဘူး။ မပျောက်ဆို ဆေးမှမသောက်တာ... ဆေးကြောက်တာလည်း ကန်ဒီ့အပြင်နှစ်ယောက်မရှိဘူး xD
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်စနေနေ့က သွားဖြစ်ခဲ့တဲ့ "သဲပုံစေတီပွဲ"က ဓာတ်ပုံတွေ မတင်ရသေးဘူးလေ။ အဲ့ဒါ ဒီနေ့တင်ပေးမလို့(:D)။ အစက သောကြာနေ့ပါ သွားကူမလို့စီစဉ်ထားတာ... ပြီးမှ ၀မ်းချုပ်ပြီး နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဖြစ်နေတာနဲ့ မသွားလိုက်ရဘူး။ စနေနေ့တော့ ညနေ ၃နာရီလောက် ဟိုအရောက်သွားလိုက်တယ်။ ရောက်တာနဲ့ ကူစရာရှိတာတွေ ကူနေတာ အဲ့မှာကျွေးတဲ့ ဒံပေါက်တောင် မစားလိုက်ရဘူး >.<
သဲပုံးတွေ လက်ဆင့်ကမ်းသယ်နေတာ ^_^
SZ Photography လို့ ရေးထားတဲ့ပုံတွေက အဲ့မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးတဲ့ ကန်ဒီနဲ့သိတဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက်ဆီက ယူထားတာ(:D)။ ဒီပိုစ့်တင်ဖို့ နောက်ကျနေရတဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာ သူဆီက ဓာတ်ပုံရဖို့စောင့်နေရတာလည်း ပါတယ် :P
ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် တစ်ခါမှ အဲ့လို သွား(၃၂)ချောင်းလုံးပေါ်အောင် မရီဖူးဘူး (သွား ၃၂ချောင်းလည်း ပြည့်အောင်မရှိပါဘူး xD)။ ဆီမီးခွက် စီနေတာ (Snapshot ပဲ)။ "စီထားလိုက်တာများ တော်တော်ညီတာပဲ"လို့ အပြောမစောနဲ့ဦးနော်... အဲ့ဒါ စီလို့မပြီးသေးဘူး -.-
ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ စာသင်နေတဲ့ ကလေးလေးတွေ ^_^
သူတို့လေးတွေရဲ့ မိဘတွေကို လေးစားပြီး ချီးကျူးတယ်။ ဒီမှာကြီးတဲ့ ကလေးလေးတွေကို ဒီလိုမျိုး ဘုန်းကြီးကျောင်းပို့ပြီး မြန်မာစာသင်စေလို့လေ။ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပြီး မြန်မာစာမတတ်ဘူးဆိုရင် ဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းလဲနော်...
ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရိုက်တဲ့ပုံတွေထဲမှာ ဒီပုံကို အကြိုက်ဆုံးပဲ... ငါကွ xD
ဗွီဒီယိုလေးပါ ထည့်ချင်တာနဲ့ Edit လုပ်နေတာ... ပြီးခါနီးကျမှ Software က ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်ပြီး အကုန်ပျက်သွားလို့ ထပ်လုပ်ရသေးတယ် (အရာရာနဲ့ အကြောင်းကြောင်း >.<)
သြော်... တစ်ခုတောင်းပန်ရဦးမယ်။ အားလုံးသတိထားမိလားတော့ မသိဘူး... များသောအားဖြင့် ကန်ဒီ့ဘလော့ဂ်မှာ ဓာတ်ပုံတွေတင်ရင် တတ်နိုင်သလောက် တခြားလူတွေ မပါအောင် သတိထားတင်တတ်တယ်လေ (သူတို့မကြိုက်ကြမှာ စိုးလို့ပါ)။ ဒီပွဲကတော့ လူမပါတဲ့ပုံ ဘယ်လိုမှရွေးလို့မရဘူး။ အများနဲ့လုပ်အားပေးနေတဲ့ပုံတွေပဲဆိုတော့ ကိုယ့်ဓာတ်ပုံပါခဲ့ရင်လည်း ကန်ဒီ့ကို စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော် =.='
ပျော်ကြလား.. ပျော်ဒယ်.. ပျော်ဒယ်နဲ့.. :)))
ကန်ဒီတို့တော့ ကုသိုလ်တွေ များကြီးရပြီ. သာဓု သာဓု သာဓုပါနော်...
တပေါင်းလ သဲပုံစေတီပွဲ ကြည်နူးစရာပဲ။ အမှတ်တမဲ့ရိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ပုံလေး ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ ချိုချဉ်လေးပြောမှပဲ သတိထားမိတော့တယ် တီတင့်ကတော့ တင်ပြီးမှ လက်လွန်သွားလို့ ပြန်ဖျက်ရပေါင်းများပြီ :P
ငယ်ငယ်တုန်းက ရွာမှာ သဲပုံစေတီအတွက် ချောင်းထဲ သဲတွေကို ပုံးကလေးတွေနဲ့ သွားသယ်ရတာကို အမှတ်ရမိတယ်
သဲပုံစေတီပွဲလေးအကြောင်းတော့ မကြာခဏကြားဖူးနေတယ် ... သိပ်ကိုကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ပွဲလေးနော် ကန်ဒီလေးရေ ... :)
I am glad to see how we maintain Burmese culture at foreign country. Wish to see it at my local too..
ပျော်စရာကြီးပဲ.. မသွားလိုက်ရတာ နာသကွာ.. ထဘီလေးနဲ့ချစ်စရာလေးး)